သြစတြေးလျနိုင်ငံ တက်စမေးနီးယားပြည်နယ်၌ ပြင်းထန်သောမုန်တိုင်းများက နှစ်များစွာအတွင်း အသည်းထန်ဆုံးမိုးရွာသွန်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေ - Xinhua News Agency
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဆစ်ဒနီမြို့၌ မိုးရေများအကြား လမ်းလျှောက်နေသော အမျိုးသားတစ်ဦးကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ် ၁ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဆစ်ဒနီ၊ မေ ၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ တက်စမေးနီးယားပြည်နယ်တွင် ထူးကဲသော မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှု ကြုံတွေ့လျက်ရှိပြီး အဆိုပါကျွန်းပြည်နယ်ရှိနေရာများ၌ မိုးသည်းထန်ခြင်းနှင့် မိုးကြိုးမုန်တိုင်းများ လွှမ်းမိုးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဆစ်ဒနီမြို့၌ မိုးရေများအကြား လမ်းလျှောက်နေသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ် ၁ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တက်စမေးနီးယားပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်သော Hobart တွင် ၂၄ နာရီအတွင်း မေ ၆ ရက် ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၉ နာရီအထိ စံချိန်းကျိုးအောင် မိုးရွာသွန်းခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၁၈ခုနှစ်ကစပြီး ၎င်းမြို့၏နေ့စဉ်မိုးရွာသွန်းမှု အမြင့်ဆုံးအဖြစ် မိုးရေချိန် ၈၅.၂ မီလီမီတာရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြို့နှင့် အနီးအနားဖြစ်သော Mount Wellington တောင်တွင် မိုးရေချိန် ၁၂၄ မီလီမီတာ ရွာသွန်းခဲ့ပြီး ၂ နှစ်တာကာလအတွင်း အမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း Weatherzone ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
Hobart မြို့၌ မေ ၆ ရက် ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ကုန်ဆုံးသော ၁၂ နာရီအတွင်း မိုးကြိုးပစ်ခတ်မှု ၁၀,၀၀၀ ခန့်အားလည်း တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း Weatherzone ၏ Total Lightning Network က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသော မိုးကြိုးမုန်တိုင်းများနှင့် လေပြင်းများတိုက်ခတ်ခြင်းများသည် တက်စမေးနီးယားပြည်နယ်၏ တောင်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်းဒေသများကို သက်ရောက်မှုရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးသည့် TasNetworks က ပြင်းထန်သော ရာသီဥတုအခြေအနေများကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း ပြတ်တောက်မှုများစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူ ၂,၄၈၂ ဦး အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ထိခိုက်မှုရှိသောနေရာများ၌ သစ်ပင်များနှင့် ဓာတ်အားလိုင်းများ ပြိုလဲခြင်းဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများစွာအား စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တက်စမေးနီးယားပြည်နယ် မိုးလေဝသဌာန (BoM) က ပြည်နယ်တစ်ဝန်းရှိ မြစ်များဖြစ်သော Jordan မြစ်၊ Macquarie မြစ်၊ Huon မြစ်၊ South Esk မြစ်နှင့် Coal မြစ်များအတွက် လတ်တလောတွင် အသေးစားနှင့် အလယ်အလတ်ရေကြီးမှု သတိပေးချက်အချို့ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မိုးရွာသွန်းမှုများမှာ နေ့လယ်ပိုင်း၌ လျော့နည်းသွားဖွယ်ရှိသလို ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ထက်ဝက်၌ မိုးကြိုးမုန်တိုင်းများဖြစ်နိုင်ကြောင်း BoM က ခန့်မှန်းထားသည်။ (Xinhua)
Violent storms bring heaviest rain in years to Australia’s Tasmania
SYDNEY, May6(Xinhua) — Australia’s state of Tasmania has been experiencing extreme weather conditions, which has seen torrential rain and thunderstorms inundate parts of the island state.
A record-breaking amount of rain was dumped on the state’s capital of Hobart during the 24 hours to9a.m. local time on Friday. The 85.2 mm rain was the city’s highest daily total since 2018.
The nearby Mount Wellington was hit by 124 mm of rain,atwo-year high, according to Weatherzone.
Weatherzone’s Total Lightning Network also detected roughly 10,000 lightning strikes in Hobart during the 12 hours ending at 10 a.m. local time on Friday. Heavy rain, dangerous thunderstorms and blustery winds are still affecting southern and eastern parts of Tasmania.
Energy provider TasNetworks said severe weather conditions causedanumber of outages, affecting 2,482 customers in the south of the state. They are still investigating multiple reports of fallen trees and powerlines in affected areas.
Tasmania’s Bureau of Meteorology (BoM) has issued some current minor and moderate flood warnings for rivers around the state, such as Jordan River, Macquarie River, Huon River, South Esk River and Coal River.
BoM forecasted that the heavy rain at times may ease in the afternoon, while possible thunderstorms may occur in the southern half of the state. Enditem
Photo-A man walks amid rain in Sydney, Australia, on March 1, 2022. (Photo by Hu Jingchen/Xinhua)
Photo- A woman walks amid rain in Sydney, Australia, on March 1, 2022.(Photo by Hu Jingchen/Xinhua)